चाडवाड: मालिक्नीको नाममा महिला दासता
बुधबार, भदौ ३, २०७७ सारङ्गी न्युज
तीज आयो। लाग्छ यो वर्ष पनि नेपाली समाजमा चाडवाडको मौसम सुरू भयो। अब तीज लगतै आउँछन् दशै, तिहार, नेपाल सम्वत र छठहरू अनि अरूअरू पनि।
छोरीले व्रत बसेर राम्रो श्रीमानको लागि याचना गर्नुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको तीजमा हुर्किरहेका छोरीहरूलाई एक किसिमको दबाब दिई नै रहन्छ हाम्रो समाज। श्रीमती भएपछि त झन् सकभर आफ्नो पतिको नाममा निर्जल व्रत नै बस्नुपर्छ भन्ने स्वरहरू पनि छदै नै छन् ।स्वरमा स्वर मिलाएर आफ्ना भनिनेहरू पनि चर्किन थालेपछि प्राय महिलाहरू त्योबाट भाग्ने या त्यसको बिरोध गर्नेभन्दा पनि त्यसैभित्र पिल्सिएर व्यवहार गर्न बाध्य छन्।
श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध या प्रेम भनेको त व्यक्तिको नैसर्गिक्ता, स्वतन्त्रता र स्वभाविक्तासङ्ग जोडिने कुराहरू होइनन् र? फेरि के सबैले विवाह गर्नैपर्ने हो? सबैको जोडी शिव र पार्वतीकै जस्तो मात्र हुन्छ त? हुनुपर्छ नै भन्ने हो भने पनि आखिर किन? महिलाहरूले रजस्वला हुँदा बार्नुपर्ने रे।
बार्दाबार्दै पनि कतै हामी चुक्यौ कि भनेर पन्चमीको पूजा लगाउनु पर्ने रे। के यही हो त यो शताब्दीमा हामीले चाहेको तीजको स्वरूप? तीज मनाउने यी र यस्तै सस्कारहरूले ममा तीजको मुखमा आइपुग्दा छट्पटी निकै बढेको छ। हुन सक्छ मेरोजस्तै अवस्थामा अरू पनि धेरै दिदीबहिनीहरू हुनु होला यो तीजको माहोलमा।
कुरा तीजको मात्रै कहाँ हो र? यहाँ त कति धेरै चाडपर्वहरूको नाममा स्थापित शैलीहरू महिला दासताको जगमा टेकेर उभिन र उठ्न खोजेको देख्दा मन भरिएर आउँछ। भित्रैबाट आवेग र प्रश्नहरू उम्लिएर पोखिन खोज्छन्। धेरैचोटि पोखिएर धर्ती भएका छन् ती। धर्तीबाट सुरू भएको पानीको कथा फेरि धर्तीमै बर्सिएजस्तै मात्रै। आखिर किन? यो प्रश्न वास्तवमा मैले आफैले आफैलाई गरिरहेकै हुन्छु, एउटा यस्तो प्रश्न जुन ममा गाढिएर बस्नुमा मात्र म जिम्मेवार छैन।
जति नै ठूला कुराहरू गरिएका भए पनि अझै पनि घरको भान्सा र भान्सेकामलाई नाइ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् नेपाली महिलाहरू। चाडवाडमा त झन् बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म मेसिनजस्तै चल्दा पनि अझै सकिएको हुँदैन उनीहरूको काम। यसको राम्रो उदाहरण संयुक्त परिवारका बुहारीहरू हुन सक्छन्। पूजाको सामान ठिक्क पारि दिने प्राय महिलाहरू नै हुन्छन् तर पूजा गर्ने चाहिँ धेरै पुरूषहरूले नै गरेको देख्छु। भर्खर विवाह गरेर आएकी नँया बुहारी नै किन नहोस्, सासुहरूले छिटै नाति खेलाउन पाइयोस् भन्दै दशैको टीका र ज्मरा लगाइ दिएको देख्छु अनि देख्छु जड्याहा श्रीमानलाई चाडवाडमा समेत परिवारको हेक्का नहुँदा नचाहेरै महिलाहरूका अँखाबाट झरेका आँसु ।
यसरी यो घर तिम्रै हो भनेर होस् या त छोरीबुहारीलाई देवी मानेझै गरेर नै किन नहोस कतै हामी चाडपर्वको नाममा महिला दासताको प्रवर्द्धन गरिरहेका त छैनौं? एकपटक सोचौं र महसुस गरेर हेरौं। सबैमा चाडवाडको हार्दिक शुभकामना।
बुधबार, भदौ ३, २०७७, १५:३२:००
#बागी विचार #तीजको व्रतकथा #आश्मा
जन्मदिनका केही कुरा– भरतमणि भट्टराई
कहिलेसम्म लकडाउन ? – भरतमणि भट्टराई
कफीमा भविष्य खोज्दै खोज्दै…- विशाल श्रेष्ठ 'ओसिएन '
हामीले बाटो निर्माण गरेसँगै सबै ठाउँहरुमा विद्युतसँगै लिएर जान सके रुपाबासीले सधैँ पूर्णिमाको रातको अनुभव लिँदै देखेका सपनाहरु बत्ती जस्तै उज्यालो र साकार हुने कुरामा कुनै शङ्का मानिरहनु नपर्ला । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा जातिय छुवाछुत भेदभाव र दलित युवाको भूमिका दलित समुदायलाई पछाडि पारिएको हो आफै पछाडि परेका होइनन्
लमजुङकी एलिना मगरकाे रहस्यम मृत्यु ४ घण्टा पहिले